Shily: BiblioRedes, avy ao Visviri mankany Puerto Williams · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 6:11 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2007)
Fanamarihana avy amin'ny mpamoaka: Ity no voalohany amin'ireo andiana lahatsoratra mikasika ny tetikasa fanaovan-gazetin'olontsotra notsidihako nandritra ny diako naharitra dimy herinandro manerana ny firenena dimy tao Amerika Atsimo.
Sarin'ny hetsika fanentanana BiblioRedes tao amin'ny tranombahoaka tao Valparaiso, Shily. Sary avy amin'i Eduardo Ávila.
Raha manao topimaso ny sarintanin'i Amerika Atsimo, mora ny milaza hoe mivelatra amina kilaometatra maro miorina eo anelanelan'ny ranomasimbe Pasifika sy ny Tendrombohitr'i Andes i Shily. Amin'ny andro fa tsy ora no handrefesana ny fotoana ilaina mba hitetezana ireo lalambe migodàna Pan-Amerikana sy any atsimo. Mety misy mihevitra fa mora ho an'ireo Shiliana no mahatsapa ho tapaka fifandraisna noho ny halavirana ara-batana manasaraka azy ireo. Manantena ny hanena izany halavirana izany sy hampifanakaiky ny olona amin'ny alalan'ny fampiasana Aterineto maimaim-poana any amin'ireo tranombokim-panjakana any an-toerana ny fandaharanasa antsoina hoe BiblioRedes (Tambajotran'ny Tranomboky).
Niteraka izany fandaharanasa izany ny fanampiana santatra avy amin'ny Fikambanana Bill sy Melinda Gates tamin'ny 2002, izay mahazo ny fanohanan'ny fanjakana Shiliana ambanin'ny Fitantanan'ny Tranomboky, Tahirintsoratra, sy Tranombakoka (DIBAM). Manome fahafahana miditra maimaimpoana amin'ny solosaina sy ny Aterineto mandeha tsara avokoa ireo tranombokim-panjakana miisa 387 ao Visviri, izay miorina eo amin'ny sisintany manelanelana an'i Shily sy Bolivia ary ny tanàna farany atsimo indrindra ao Puerto Williams izay eo akaiky ny Tendrontany Atsimo. Any amin'ny sasany amin'ireo faritra mitokana idnrindra ao amin'ny firenena izay manana foto-drafitrasa tsy mandroso, toy ny nosy Robinson Crusoe , amin'ny alalan'ny zanabolana no isian'ireo fifandraisana. Hita tamin'ny fanisana natao vao haingana fa ny ankamaroan'ireo solosaina manokana dia miorina eo amin'ny faritra afovoan'ny faritany na ny renivohitra Santiago avokoa. Omen'ity fandaharanasa ity fahafahana hianatra hampiasa solosaina ny olona izay tsy afaka miditra amin'ireo teknolojia ireo. Raha atambatra, solosaina eo amin'ny 2.300 eo no misy eny anivon'ireny tranomboky ireny.
Tantanan'ny encargado (mpandrindra) iray ny tsirairay amin'ireo tranonkalan'ny BiblioRedes ireo, izay olona nalaina avy tamin'ilay vondrom-piarahamonina. Ny fahatokisan'ny rehetra ao amin'ilay vondrom-piarahamonina sy ny fahafantarany ny zava-misy manodidina ny kolontsaina eo an-toerana no tombontsoa azo avy amin'izany. Mandray anjara amin'ny fanofanana koa ireo mpandrindra, izay avy eo mampianatra ireo mponina eny amin'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana.
Ankoatra ny fahafahana miditra maimaimpoana amin'ny aterineto, manome fampiofanana amin'ny fahaizana manoratra sy mamaky tena niomerika amin'ny alalan'ny andiana atrikasa maro ny BiblioRedes, indrindra ny fampiasana ny Microsoft Office, ny rakipahalalana Encarta ary ny fomba fanaovana fanolorana sy fanehoana. Hatramin'izao, Shiliana mihoatra ny 200.000 no efa nandray anjara tamin'ireny atrikasa ireny. Iray amin'ireo lafiny tsara amin'ireny fampiofanana ireny ny fampianarana amin'ny fanamboarana ny tranonkalany manokana. Maro no mampiasa ity sehatra ity mba hiresahana momba ny fiarahamonina misy azy, ny zavatra mahaliana azy manokana na koa ny kolontsainany eny an-toerana. Raha atambatra, eo amin'ny tranonkala 3 000 eo no ampiantranoan'ny lohamilina BiblioRedes.
Manasongadina ny tsara indrindra amin'ity vontoaty ity ny blaogy iray antsoina hoe Contenidos Locales [es] (Vontoaty Eny An-toerana) ary mampifantoka izany amin'ilay tranonkala navaozina. Manamora ny fitadiavana vontoaty ireo sokajy toy ny: Tantara [es], angano feno anatra [es], Mozika [es], Teratany [es], Fizahantany [es] ary Fivavahana [es].
Miresaka mikasika ny fialambolin'ireo mponina avy amin'ny vondrompiarahamonina eny an-toerana ny sasany amin'ireny tranonkala ireny, izay noforonin'ireo mpandray anjara. Ohatra, namorona tranonkala antsoina hoe La Esperanza [es] momba ny vondrona olon-dehibe avy amin'ilay vondrompiarahamonina izay nirotsaka tamina kliobana dihy vakodrazana i Ángel Calfuan. Ampiantranoin'ny antenimieran'ny tanànan'i Carahue ny tranombokin'ny vondrompiarahamonin'i Trovolhoe ary manana ny tranonkalany manokana [es].
Miasa amina tetikasa antsoina hoe MANDIHY MANDRITRA NY TAONA VOLAMENA HO ANA FIAINANA SALAMA ireo olondehibe avy amin'ity vondrona ity. Nahazo olondehibe 18, eo amin'ny 60 ka hatramin'ny 97 taona eo, ilay fandaharanasa. Ny hamoronana fahafahana mampifandray amin'ny fomba madio ireo olondehibe, hanohana sy hanamafy ny fampiasana vatana sy ny fahasalamaa ara-tsaina amin'ny fandihizana vakodrazana no tanjona ankapoben'ity tetikasa ity. Ny hanome vondrona mpandihy vakodrazana ao Trovolhue ihany koa no tanjon'izy ity mba hisolo tena ireo olondehibe mandritra ny hetsika ara-kanto sy ara-kolontsaina maro isankarazana ao anatiny sy ivelan'ilay vondrompiarahamonina.
Ampiasana ho fitaovana ara-barotra sy fanaovana dokambarotra ho an'ny fandraharahàna eny an-toerana ny tranonkala hafa. Tranonkala iray manasongadina ireo trano fisakafoanana maro isankarazany ao amin'ny tanànan'i Punta Arenas ny Gastronomía Magallánica [es] . Ny sasany kosa dia mitodika kokoa amin'ny resa-pianakaviana, toy ny tranonkala noforonin'i Jhoscenia Arancibia mba hampahafantarana ny orinasa [es] tantanany miaraka amin'ny vadiny.
Orinasam-pianakaviana kely natokana ho an'ny fitrandrahana ireo vokatra avy amin'ny fiompiana tantely, toy ny ranon-tantely hatramin'ny tolotra fampivadiana ny lahimbony amin'ny vavimbony ny Colmenares Arancibia. Tsy sarotra ny asa miaraka amin'ny tantely, fa ilaina ny milamina, manokan-tena, tena tomponandraikitra, ary mazava ho azy, tsy sarotiny amin'ny tsindron'ny tantely.
Fanampin'izany, loharano ho ana rehareha ara-kolontsaina ihany koa ireny tranonkala ireny, indrindra fa eny anivon'ireo vondrona teratany. Teratany maro no hita ao Shily ary ny vondrona indizeny Kaweshkar no mponina voalohany tao amin'ny faritra Tierra del Fuego (Tanin'Afo) ao Shily. Manokatra tranonkala [es] am-pireharehana [es] mba hiresahana momba ny fomba fiainany [es] sy ny fombandrazany [es] i Carlos Pedraza [es]
Kawésqar no tenin-dry zareo, anarana izay iantsoany ny tenany. Amin'ny teniny, midika hoe ”olona” na ”olombelona” izany teny izany. Tany am-piandohana, nanana heviny ratsy ny anarana hoe alacalufe ary tsy nampiasa izany teny izany ry zareo.
Mitantana tranonkala ho ana vondrom-piarahamonina Aymara ao Shily [es] ihany koa i Luis Carvajal, izay vondrona teratany matetika heverina ho tsy misy afa-tsy ao amin'ny manodidina an'i Bolivia sy Peroa.
Araka ny lazain'i Enzo Abbagliati, Mpandrindra Nasionalin'ny BiblioRedes, misy tombontsoa azo avy amin'ny fampidirana ao amin'ilay fandaharanasa ny fanampinà fampiofanana ahafahana mandray anjara bebe kokoa, toy ny famoronana sehatra fanoratana blaogy izay hanome fahafahana ireo mpandray anjara hahita olona mitovy hevitra aminy manerana an'i Shily sy izao tontolo izao.